Internetka Juni ppt ladda ner
Internetka Juni 2013.
En presentation över ämnet: "Internetka Juni 2013."— Presentationens avskrift:
1 Internetka Juni 2013
2 Internetka Internetka waa qadka aduunka ugu balaaran oo kugu soo bandhigaya fursad aad ku heshid xiriir dhinaca qoraalka, dhawaaq iyo sawir. Qadka internetka loo isticmaalo waa World Wide Webb (waxaa loo soo gaabiyaa www) waa qaybta la adeegsado marka aad boggaga internetka ka raadineysid warbixino iyo ka. Ayada oo la adegsanayo boggaga internetka ayaa shaqooyin kala duwan qabsan kartaa sida golaha ama xaajooyin dhinaca xiriirka, war faahfaahinta, Adeegsiga internetka iyo wikier. World Wide webb Waxa uu soo jiray ilaa 1990-kii bilaawgiisa waana kii dadweynaha caan ka soo dhigay internetka.
3 Internetka – waa caalamka qad ka dhaxeeya
Internetka waxa uu ku siinayaa fursado cajiib ah, oo si dhakhso ah aad ku heli kartid warbixin iyo akhbaaro iyo xiriir qoraal ah ama sawiro muuqaal ah iyo cod maqal ilaa meelkasta aduunka. Kombiyuutarada kala duwan oo aduunka gees kasta ka yaala waxay ku xiranyihin qadkan internetka, oo ku siineysaa fursad si dhakhso ah aad ku heleysid warbixino xitaa ceelka warbixinta laga keenaayo ee aad u fogtahay Dhinaca aad beryahan loga istcmaalo internetka waa fursada ayadoo guryaha la jooga ayaa aduunka xiriirineysaa ama ka shaqeyneysaa ayada oo la adegsanaayo internetka. Soo sharaxitaan dokumenti iyo isku xiriiritaan dhinaca buulshada sida buuga wajiga sociala medier , tusaale war faahfaahiyaasha shaqsiyeed, golaha buushada sida Facebook ama sawirada aad qaybisid iyo filimaanta dhinaca Youtube ama Flickr. Maanta waxaa istcmaala golaha isku xiriiriya buulshada shirkadaha iyo ururoda badankood si ey internetka ugala xiriiran macaamiishooda mustaqbalka, maadaama waa hab fudud oo dhakhso badan aad ku gaarsiinaysid ujeedaada iyo aad la yeelatid wada hadal. Waxaa la dhahaa in internetka waxuu ku fiicanyahay waa uu na ku xumyahay – Cidii doontaa ayaa soo gelinaysa waxii ay doonaan meel kasta ay joogaan. Cid kontroollaysa warbixintaas baa iska yar. Xafiis dawladeed oo ku shaqo leh in ay kontroollto baana jirin. Warbixinta waa u furanyahay dadweynaha oo dhan si fudeyd ah waa lagu heli kara markaas waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan ; hey’adaha warbixintooda, Qoraalada cilmiga aqoonta, xayeeysiis ama dacaayad. Sidaas daraadeed bay aad u muhiimtahay in laga digtoonsanaado qofka ka danbeeya warbixinta aad ka heshay internetka. Isticmaalka internetka waa lacag la’aan laakin waxaa daruuri ah in aad khad kuugu jiro kombiyuutarka. Qofka haduu rabo in uu guriga ka soo isticmaalo kombiyuurtarka waxuu u baahanyahay in uu la galo heshiis shirkadaha khdadka internetka ibiya.
4 Barnaamijka akhriya bogga internetka
(En webbläsare) barnaamijka akhriya bogga internetka waa hal barnaamij loo isticmaali in uu akhriyo boggaga internetka – rogrogista boggaga internetka. Barnaamijo kala duwan oo akhriya boggaga internetka, ka ugu caansan waa (Internet Explorer) oo la socda Windowska ee nidaamka kombiyuutarka (operativsystem). Tusaaloyaal kale waa Mozilla Firefox, Safari, Opera iyo Google Chrome. Kombiyuutarada isticmaala nidaamka Windowska (operativsystem) waxaa ku dhex jira bogg akhriye (Internet Explorer) oo la socda muuqaalkiisa waa sida ikonada.Hadii kale waxaa ka soo shuban kartaa barnaamijka batoonka bilawga loo yaqaano (startmenyn).
5 Ciwaanada boggaga http://www.google.com
Ciwaanka bogga waa hal bogg ciwaankiisa ee gudaha internetka. Magac kale oo loo garto waa URL (Universal Resource Local). Waxaad ku heli kartaa goobta ciwaanka marka lagu qoro ciwanka goobta adreeska bogg akhriyaha. Bogga ciwaankiisa waxuu ka koobanyahay dhawr qaybood: - oo laga soo gaabiyay hyper text transfer protocol. www – oo laga gaabiyay world wide web. Google - domän/server, Inta badan waa iskaga mid magaca bogga. Qaybta ciwaanka oo kuu hagayey bogga aad raadinaysey ama cida booga ciwaanka iska leh. Com oo laga soo gaabiyay Company. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa toppdomän oo way kala duwan tahay mid kale mid kale ayuu ka duwan yahay Qaarkood waxaa loo soo gaabiyaa tusaale; .se – Iswedhan, .no – Norway iyo waxii la mid ah. Boggaga ciwaanada oo Maamul degaanka iswedhishka mar walba waxay ku dhamaadan .se , sidan oo kale toppdomän: Waxaa jira tusaale kuwan hoos oo la soo gaabiyey: .net waxaa laga soo gaabiyey network. .edu waxaa laga soo gaabiyey education .gov waxaa laga soo gaabiyey government. .info waxaa laga soo gaabiyey Information. .org waxaa laga soo gaabiyey organization. Sidan marka loo soo gaabiyo ma cada shayga ku jira ciwaanka bogga.
6 Webbläsarens gränssnitt
Vi väljer Internet Explorer eftersom det är den mest använda Gadal Hore Garoonka qoraalka Garoonka ciwanka Raadi Safka buga yar Ikonka soo saare Bilawga Boggaga loogu jecelyahay Garoonka amrka
7 Garoonka magaca Bogga kuu furan magaciisa ayuu kuu furayaa. Batoonada midigta kaa xiga waa yarey waynay iyo demi.
8 Garoonka ciwaanka Bogga ciwaankiisa oo dhamaystiran ayaa ku qoreysaa garoonka midigta kaa xiga. Garoonka kale oo midigta kaa xigaa waxuu ku xiranyahay raadiyaha Google. Gadaal iyo hore Dib u akhri boggan mar kale Jooji akhriska boggan URL
9 (Startsida) Batoonka bilawga
Sifooyinka buuga Waxaa laga helayaa buugaga yar ee ugu muhiimsan. Garoonka amrka Waxaa laga helaa alaabada ugu muhiimsan sida: Soo saare, Batoonka bilawga (Startsida) iyo waxii la mid ah. (Startsida) Batoonka bilawga Soo saare
10 Waxyaalaha loogu jecelyahay
Hawlgalada loogu jecelyahay waxuu ku siinayaa fursad aad ku koobtid listo ayadoo si dhakhso ah kugu xiriirinaya boggaga oo aad u booqatid. Goobta xaalada Bogg akhriye hoostiisa ayaa ka arki karta sida u akhrinaayo bogga aad rabtay. Marka uu bogga dhamaado akhrintiisa ayuu midabka cagaar noqonayaa.
11 Waa muujin kartaa ama qarin kartaa garoonka. Riix halkan Visa menyga,
kadib dooro Garoonka shaqada ama qalabyada Ka dooro garoonka aad rabtid in aad muujisid/qarin. Hal shay Garoonka hortiisa waxaa kaaga muuqda midka kuu calaamadaysan .
12 Bilawga bogga/Homepage
Waxaa jirta labo siyaabood oo aad doran kartid ama baddeli kartid: 1	Ku qor bogga ciwaankiisa oo dhan (URL) Bogga ciwaanka aad rabtid in uu kugu soo shidmo marka aad furatid bogg akhriye, (ku calaamadaysan khadka casaanka ama guduudka ah, Halkan riix enter. U gudub ikonka (guriga) falaarta riix ku aktaala (guriga). Dooro wax kale, kadib ku dar bogg ama ka baddel mid hore kuugu jiray (Lägg till eller ändra startsida). Kuu furmaya bogg akhbaar ku qoran. Dooro: Dooro boggan in aad u usticmaashid in uu kuugu furo bogg akhriye ciwaankan.
13 2 Riix halkan qalabyada (Verktyg,) dooro halkan wax ka baddelka internetka (Internetalternativ).
Ciwaanka bogga oo saxan ku qor (URL) bogga aad u rabtid in loo isticmaalo in uu kugu furo bogg akhriye (Internetka) marka aad furatid internetka, (calaamadaysan khadka casaan ama guduud) kadib halkan riix OK hoos goobta falaarta ku tusayso.
14 Ku darid ama ka saaris boggaga la jecelyahay
Gudaha favoriter waxaa ku dari kartaa ciwaanada boggaga oo si joogto aad rabtid in aad u booqatid. Fur ciwaanka bogga u gudub safafaka menyga, dooro Favoriter kadib sii riix halkan ku dar boggaga aad jeceshahay (Lägg till favoriter).
15 Högerklicka på webbsidan och välj Ta bort
Marka laga saaro boggaga ku jira Favoriter: Fur Favoriter dhinaca safafka menyga ikonka (ee xidigta jaalaha ah) (Halkan) Favoritfält . U gudub ciwaanka bogga oo aad rabtay in laga saaro listada boggaga la jecelyahay (Favoritlistan). Ciwaanka bogga labo jeer ku riix batoonka midigta ee jiirka kadib riix halkan Ta bort. Högerklicka på webbsidan och välj Ta bort
16 Ka tirtir bogg akhriye ciwaanada aad booqtay iyo faylalka ku meel gaarka ah.
Ciwaanada aad booqatay iyo faylalka ku meel gaarka ah waxay ku kadismayaan kombiyuutarka. Faylalkaas waxay ku keenaysa kombiyuutarka culays iyo dib waa loo isticmaali karaa faylalkaasi waxii ku dhex jira mar kale. Sidaas daraadeed waxaa fiican ki laga tirtiro kombiyuutarka faylalka ku meel gaarka ah . Ka fur halkan qalabka Verktyg dhinaca buugaga yaryar oo isku xiga kadib dooro halkan Internetalternativ.
17 Hadii aad calaamadaysid dariishadan cagaarka ah dhinaca dhexda shaashada kaa xigta : Ta bort webbhistorik när du avslutar, waxaa ku qoran ka tirtir taarikhda bogg akhriye, waa uu ka tirtirmayaa marka aad dib u shidid kombiyuutarka. Hadii aad halkan riixdid Ta bort hoos waxaa kuugu soo baxaya wada hadal warbixin. Calaamaday meelahan falaarta kuu tilmaamayso oo midigta kaa xigta sidaad u tirtirtid Ta bort. Kadib riix OK xagga sare kaa xigta. Markii aad rabtid in aad ka tirtirtid bogg akhriye taariikhda boggagii hore aad booqatay, Ogeeysiis waxba ka ma baddeleyso listada boogaga la jecelyahay oo hore aad u dooratay.
18 Ka soo dabaco boggaga hoyga internetka
Marka aad internetka ku jirtid waxaaa laga yaabaa in aad warbixin kala soo baxdid. Waxaad riixda Arkivka sida falaarta ay ku tusayso kadib dooro (Skriv ut). Waxaa kuu furmaya bogg yar oo akhbaar ku qorantahay, waxaa ku qoran doorashooyin kala duwan. Waxaa xitaa dooran kartaa in aad qayb ka mid ah bogga in aad soo dabacatid. Calaamaday qoraalkii aad rabtay in aad soo saratid adigoo hoos u riixaya batoonka bidixda ee jirka. Kadib batoonka midigta ku kor riix sidaad u soo saaratid qoraalkaagii aad calaamadasatay.
19 Ka soo shubo sawir boggaga internetka
Calaamadeyso sawirka, batoonka midigta ee jirka ku riix kadib dooro kaydi sawirka Spara bild som. Waxaa kuu soo baxaya bogg yar oo akhbaar kuugu qoran fiirso sawirka
20 Dooro ama sheeg goobta aad sawirka ku kaydinaysid kadib magac u yeel sawirka, Kadib riix spara.
21 Barnaamijyada baaritanka iyo raadiska
Waxaa jira barnaamijyo laga isticmaalo hoyga internetka oo raadiya warbixin/akhbaar raadin Marka aad warbixin ka raadinaysid internetka. Ciwaanka ugu caansan oo caalamka aad loga isticmaalo waa Google, Laakin waxaa jira kuwa kale oo la adeegsado oo la mid ah:
22 Google Ku qor madadii aad raadinaysay ama rabtay garoonka qoraalka. Boggagan hada soo socda ayaa ka hadli doona menygar oo calaamada casaanka leh A,H Skriv här vad du vill söka efter
23 A) Darta internetka Ka raadi hoyga internetka beesha caalamka. Ku qor waxii aad raadinaysid. Waxaa kuu soo baxaya dhowr boggag oo la mid ah eraygii aad ku qortay (sökresultat). Riix oo fur boggaga mid ka mid ah (Midabka qoraalka uu ku qoranyahay waa bluug). Hadii aad rabtid in aad dib ugu noqotid hindisadii hore waxaad riixaysaa falaarta gadaal oo kaa xigta dhinaca bidixda ee korka bogg akhriye. Gadaal erayada Ciwaanka bogga Hindise
24 B) Sawiro Tusaale: Ubaxyo. Waad kadsan kartaa sawir adidoo
Kaliya erayada ama/ tacbiirta aad ku qortay garoonka qoraalka ayaa kuu soo muuqanaya. Tusaale: Ubaxyo. Waad kadsan kartaa sawir adidoo calaamadaynaya sawirkii riix batoonka midigta, dooro ”ii Kaydi ...” iyo dooro goobta aad ku kaydinaysid	sawirka gudaha kombiyuutarka.
25 C)	Filimaan/muuqaal Raadi muuqal filim ah oo ku saabsan waxii aad raadinaysay, tusaale: libaax;
26 D) Qaarad/maab Waad raadin kartaa goobyo kala duwan markaas waxaa kuu soo baxaya mabyo am qaarado. Qaar ka mid ah mabyada ama qaaradaha waxaad u siticmaali kartaa hagitaan.
27 E) Warka Waxaad tusaale u isticmaali karta markaad raadinaysid warar qaas ah. Waxaad tusaale akhrisan kartaa wargeeyaal adigoo kula qabanaya jiirka qoraalada kuu soo baxay oo midabka bluuga ku qoran. Ämne du söker efter Webbadress Sökresultat
28 F)	Turjum Marka la rabo in qoraal la turjumo oo luqad kale loo turjumo. Dooro luqadii aad rabtay in aad ka turjumtid Dooro luqadii aad rabtay in aad u turjimtid Halkan riix hadii aad rabto in aad maqashid qoraalkii laguu turjumay Ku qor qoraalkii aad rabtay in aad turjumtid
29 Furo akwanti cusub G-mailka Hadii aad hore u furatay akwanti G-mail
G)	G-mail Sameeyso ciwaanka ka adigoo halkan riixaya furitaanka ciwaanka akwantiga cusub SKAPA ETT KONTO google hoostiisa. Furo akwanti cusub G-mailka Hadii aad hore u furatay akwanti G-mail Ku qor magaca aad ku sameeysatay, iyo eray sirta kuu ah kadib riix halkan Logga in
30 h) Siyaado Siyaado hoosteeda Mer waxaad ka heleysaa doorashooyin kala duwan, fiiri hoos.
Ladda ner ppt "Internetka Juni 2013."
Titti Josefsson & Ingegerd Sandström